Sarkaal Ciidan Oo Lagu Dilay Dalka Afghanistan. – Calamada.com
Sarkaal Ciidan Oo Lagu Dilay Dalka Afghanistan.
calamada January 24, 2017 1 min read
Ciidamada Imaarada Islaamiga ah Afghanistan ayaa weerar culus ku qaaday deegaan lagu magacaabo Cabaas Kheyl oo hoos tagta degmada Ajaristan ee dalka Afghanistan.
Weerarkaasi waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ku dileen sarkaal ciidan oo lagu magacaabi jiray Saalow oo ka tirsanaay maamulka daba dhilifka Afghanistan ee fadhigiisu yahay magaalada Kaabul.
Dhanka kale kamiin ka dhacay duleedka magaalada Lashkar-gaah ee gobalka Helmand waxey ciidamada Mujaahdiinta ee Imaarada ku gubeen gaari ciidan waxeyna sidoo kale dileen tiro askar ah oo ka tirsan maamulka Kaabul.
Sidoo kale Shiishyahanada Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa toogasho ku dilay shan askari oo ka tirsan maamulka Ridada Afghanistan kuwaasi oo ku sugnaay deegaanka Bowlan-nimro oo ah deegaan hoostaga magaalada Lashkar-gaah ee xarunta gobalka Helmand.
Previous: Gudoomiyaha Degmada Buurhakabo Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday.
Next: Qarax Dowlada Federaalka Looga Dilay Inka Badan Shan Askari.